Ubaluleko Kwezemithi Loju
Ngaphandle kokudla okunomsoco kanye namandla okuhlinzeka ukudla, uju uye waziwa kusukela ezikhathini zasendulo ukuba abe yi-antimicrobial and antibacterial. Yayisetshenziswa ngabahlengikazi bamaGreki, amaRoma, abaseGibhithe nabaseShayina ukuphatha izifo ezisemathunjini ezinjengezilonda zesisu futhi njengendlela yokwelapha indlebe, umkhuhlane kanye nokukhwehlela ngenkathi eNdiya, uju we-lotus isetshenziselwa ukuphatha izifo zeso.
Uju luthinta izifo futhi luphulukisa amanxeba, kuhlanganise nokushisa kanye nezinambuzane nezimbongolo. Ukusetshenziswa koju kungasiza ukuphulukisa amanxeba anegciwane angaphenduli kuma-antibiotiki nakwa-antiseptics. I-viscosity yoju igcina amanxeba enomanzi futhi inikeza umgoqo wokuvimbela ukutheleleka.
Uju ludla i-psoriases, lusiza ngokuhlanza isilonda kanye nokuvuselelwa kwezicubu. Ucwaningo oluthile lwamuva luye lwabonisa uju ukunciphisa ukuqhubeka komdlavuza.
Ama-honeys ebanga lezokwelapha anemisebenzi enamandla ye-bactericidal emelene nama-antibiotic-resistant bacteria angabangela izifo ezisongela ukuphila kubantu. Kodwa-ke, izakhiwo zokulwa namagciwane zihluka ngokusho komthombo we-nectar. Uju olusetshenziselwa izinhloso zokwelapha noma zokwelapha kufanele lucutshungulwe kancane, luhlungiwe kodwa lungasetshenzisiwe. Ama-honezi athile ayenziwa njenge-manuka angathengiswa ikakhulukazi njengezixazululo zabantu ngenxa yemithombo yabo ekhethekile yesitshalo kanye nezakhiwo eziyingqayizivele.
Umsebenzi we-antimicrobial ezinhlobonhlobo eziningi zobuningi ngenxa yokukhiqizwa kwe-hydrogen peroxide, i-antiseptic emnene. Abacwaningi eNew Zealand University of Waikato bathola ngo-1981 ukuthi i-Honey Manuka inezinga eliphezulu kakhulu lama-enzyme kunokwenyama. Yilezi zinkimbinkimbi ezakha i-hydrogen peroxide yemvelo. Amandla antibacterial of honey manuka uboniswa njenge-UMF - Unique Factory Manuka - futhi uqinisekisa ikhwalithi yayo yokwelapha.
Ama-Manuka elwa ama-Staphylococcus aureus kanye nokusiza ukwelapha izimo ezivela ku-acne nesifo sofuba esiswini kuya ku-reflux ye-asidi namasosha omzimba abuthakathaka.